देउवाले अर्को रेकर्ड कायम गरे Globe Nepal News Portal
Deuba with NAC Pilot
काठमाण्डौं, भदौ १२ यस पटकको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले के के गरे ? भन्ने विषयमा अहिले चासो र चर्चाको विषय भएको छ । तर पाईलट विजय लामा भने सरकार प्रमुख देउवाको भ्रमणवाट साह्रै खुशी भएका छन,उनले आईतवार प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको फलाईट दिल्लीवाट काठमाण्डौं अवतरण गराएका थिए । त्यसै मेसोमा तस्वीर सहित उनले लेखे - "रास्ट्र प्रमुखहरुले, सरकार प्रमुखहरुले नेबानिलाई जनताले जस्तै माया गरिदिने हो भने नया फड्को लिन कुनै कठिन हुन्न- ने बा नि लाई । हुन पनि कुनै समय विश्वका महत्वपूर्ण शहरहरुमा पुग्ने नेवानी अहिले पुन : आफूलाई जागरणको युगमा प्रवेश गराउँदैछ ।
उनले लेखेका छन- नेबानि राम्रो बन्नु भनेको नै नेपालीहरुको लागि राम्रो हो,देशको गौरव बढाउनु हो,ने बा नि जनताको संस्थान हो, कोहि एक ब्यक्ती या समुहको होइन ,उनले आफनो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन - धेरै सम्भावनाहरु बोकेको संस्थान हो यो ।
खासमा नेपालको आम्दानीको स्रोत नै पर्यटन हो, त्यसैले लामा लेख्छन- यहाँ गर्न चाहे जे पनि गर्न सकिन्छ। नेपालको पर्यटनलाई ठूलो टेवा पुर्याउन सक्ने क्ष्ँमता भएको संस्थान हो यो । यसले पर्यटकिय गन्तब्य बनाउन मद्दत पुर्याउन सक्छ।लामाले अगाडि लेखेका छन -"अहिले जुन किसिमको माया र साथ मिलेको छ, नेपाली जनता र रास्ट्रप्रमुखहरुबाट ने बानिलाइ, त्यो नै उर्जा बनेको छ, नया जोश र जाँगरका साथ काम गर्नका लागि हामी यहाँ कार्यरत सबैलाइ र यस संस्थाको कर्मचारि सदस्यहरुले कदर गर्नको निम्ति सहि काम गरेर साबित गर्नु पर्छ कि ,हामी गर्न सक्छौ र जसरी भए नि बनाउछौ भनेर प्रतिबद्दता जाहेर गर्नु पर्छ ।
उनले अन्त्यमा लेखेका छन -प्रधानमन्त्री ज्यु धन्यवाद नेबानिमा यात्रा गरिदिनु भएकोमा,प्रथम महिला तथा पर्यटन मन्त्रीज्युहरुलाई पनि धन्यवाद । उनले सवैलाई मुरि मुरि धन्यवाद भन्दै यस्तै माया पाउ हजुरहरु सबैको भनेका छन् ।
यो सँगै शेरवहादुर देउवाले लामो समय पछि नेपाली सरकार प्रमुख विदेशमा राजकीय भ्रमणमा जाँदा स्वदेशी विमान कम्पनीको जहाज उपयोग गरेर नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएका छन् ।
डाेजरकाे बकेटले हान्ने चालक पक्राउ तर मान्छे मार्ने गरि वाटाे कसले बनायाे ?
नेपालमा अर्काे द्धन्द्धकाे सुरूवात,विप्लवले भने-जनसेना बनाउँछाैं
महरा थप ५ दिन प्रहरी हिरासतमा रहने,राेशनी शाहीले प्रहरीले जवरजस्ती गरेकाे अभियाेग लगाइन
सभामुख निर्वाचनमा झन झमेला,उपसभामुखले कसलाइ राजीनामा वुझाउने ?
एनआरएन चुनावमा कुमार पन्तकाे प्यानल नै विजयी,कसले कति मत पाए ?
एनआरएन अध्यक्षमा कुमार पन्त,महासचिवमा शर्मा र सचिवमा जाेशी निर्वाचित
नेकपा नेता झक्कु सुवेदीकाे छाेरा पक्राउ
प्रचण्ड भन्छन-अझै एक पटक युद्ध गर्न मन छ
भाेटिङ मेशिन विग्रिएर स्थगीत एनआरएन चुनावमा नयाँ माेड, अहिले दस बजेबाट मतदान सुरू हुने
झलनाथ र माधवले किन मन्त्रीपरिषद पुर्नगठन हुदैन भने ?
एनआरएन सम्मेलन किन बहिष्कार गरे डा.उपेन्द्र महताेले ?
काठमाण्डाैं,कार्तिक ५ गते । वैतडीमा बाटाे बनाउदा अवराेध गरेकाे भन्दै स्थानीयलाइ डाेजरले नै...
काठमाण्डाैं,कार्तिक ४ गते । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वकाे नेकपाले युद्धकाे चेतावनी दिएकाे छ।...
काठमाण्डाैं,कार्तिक ३ गते । बलात्कार अभियाेगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका पुर्वसभामुख...
काठमाण्डाैं,कार्तिक ३ गते । सत्तारूढ नेकपामा नयाँ झमेला देखा परेकेा छ । बलात्कार अभियाेगमा...
काठमाण्डाैं,कार्तिक १ गते । एनआरएन चुनावमा कुमार पन्तकाे प्यानल नै विजयी भएकाे छ।कुल...
काठमाण्डाैं,कार्तिक १ गते । एनआरएन अध्यक्षमा कुमार पन्त विजयी भएका छन।उनले प्रतिस्पर्धी कुल...